जीटीनको वनभोज, भिक्तेपात्रो विमोचन र सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न - Tourism Pati
५ बैशाख २०७८, आईतवार १३:१०
काठमाडौं । गुरुङ पर्यटन व्यवसायी संघ नेपाल (जीटीन) को वनभोज तथा भिक्तपात्रो विमोचन र सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शनिबार आयोजित एक समारोहबीच बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङले जीटीनले प्रकाशन गरेको भित्तोपात्रोको विमोचन गर्नुभयो । उपसभामुख तामाङले पर्यटन व्यवसायीको हकहित र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जीटीनको भूमिकाको प्रसंशा गर्नुभयो । पर्यटन व्यवसायीले उठाएका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै तामाङले पर्यटन व्यवसायीका माग र समस्याबारे छलफल गर्ने तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले जीटीनले पर्यटन क्षेत्रमा सधैं आफ्नो अस्तित्व र महत्वलाई उच्च राख्न भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।
नेपाल पर्वतरोहण संघका महासचिव तथा जीटीनका संस्थापक अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, निवर्तमान अध्यक्ष कमला गुरुङले जीटीन स्थापना भएदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दाको सफलताबारे चर्चा गर्नुभयो । अध्यक्ष अम्बिर गुरुङले जीटीनले गर्दै आएका गतिविधीको चर्चा गर्नुहुँदै जीटीनको बनभोज तथा भिक्तेपात्रो प्रकाशनमा सहयोगीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा विभिन्न संघसंस्था, विभिन्न संघसंस्थामा निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई सम्मान गरिएको थियो । साथै नयाँ नेतृत्वमा पुगेका गुरुङ पर्यटन व्यवसायी जीटीनका सल्लाहकार टिकाराम गुरुङ, सचिव बाबुराम गुरुङ, सदस्य अविनाश गुरुङ र दिलमाया गुरुङलाई सम्मान गरेको थियो ।
कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल टानका महासचिव सरिता लामा, पर्यटन गाउँ प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालका पूर्व अध्यक्ष कमल सापकोटा, तमू ह्यूल छोज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका उपाध्यक्ष आर. बी. गुरुङ, शेर्पा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा लगायतले शुभकामना मन्तब्य राख्नुभएको थियो ।
जीटीनका द्वितीय उपाध्यक्ष तथा भिक्तेपात्रो प्रकाशन समितिका संयोजक पिताम्बर गुरुङले जीटीनको भूमिकालाई समेटेर कविता वाचन गर्नुभएको थियो । यसैगरी जीटीनका कोषाध्यक्ष तथा बनभोज कार्यक्रमका संयोजक विन्दु गुरुङले वनभोजमा सहभागी सबैलाई स्वागत तथा सहयोगीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । वनभोज कार्यक्रमलाई जीटीनका सहकोषाध्यक्ष जय गुरुङले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने मनोरञ्जनात्मक बनाउन जीटीनका महासचिव किसनराज गुरुङको सांगितीक प्रस्तुतीले साथ दिएको थियो ।